Account Executive ဆိုတာဘာလဲ? - Intern Plus
Account Executive ဆိုတာခုနောက်ပိုင်းမှာ အခေါ်များလာတဲ့ position တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
Account Executive တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ဘာတွေလိုအပ်မလဲ။ AE တစ်ယောက်ရဲ့ အလုပ်တာဝန်ကဘာတွေဖြစ်မလဲ။
Account Executive လို့ကြားလိုက်တာနဲ့ တော်တော်များများက Account ဆိုတဲ့စကားလုံးကြောင့် Finance ဘက်အခြမ်းကလို့ပဲ ထင်မိတတ်ကြပါတယ်။ Agency ကခေါ်တဲ့ Account Executive ကတော့ Finance အတွက်ဖြစ်လေ့မရှိပါဘူး။
အလွယ်ကူဆုံးပြောရရင် AE ဆိုတာ Salesperson + Public Relationပါပဲ။ AE တစ်ယောက်က ကိုယ့် company နဲ့ client company ရဲ့ကြားက ပေါင်းကူးတံတားတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ ကိုယ့်companyဘက်ကပေးနိုင်တဲ့ product & service တွေအကြောင်း client ကိုပြောပြပေးမယ်။ Client ဘက်ကတောင်းဆိုချက်၊ရည်မှန်းချက်တွေကို ကိုယ့်companyရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ department ကို ပြန်တင်ပြပေးမယ်.. အစရှိသဖြင့်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ AE တစ်ယောက်ဟာ client အသစ်တွေကိုလည်းရှာဖွေဖို့လိုအပ်သလို ရှိပြီးသား client တွေနဲ့လည်း အဆက်အသွယ်မပြတ်ဖို့၊ Relationship ကောင်းကောင်းရအောင်တည်ဆောက်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
ဘယ် Department တွေနဲ့လုပ်လုပ်ရလဲ?
Account Executive တစ်ယောက်ဟာ များသောအားဖြင့်တော့ Marketing, Copywriting, Creative and Project Department စတဲ့ Department တွေနဲ့ အများဆုံးအလုပ်လုပ်ရလေ့ရှိပါတယ်။
Marketingနဲ့သက်ဆိုင်ပြီး လူအများနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တာကြောင့် Business, Marketing, Advertising, Journalism, Public Relation စတာတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး Degreeဒါမှမဟုတ် Certificate တစ်ခုခုရထားရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်။
AE တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရှိသင့်တဲ့ Additional skillsတွေက..
Client တွေနဲ့ မကြာခဏ meetingတွေထိုင်ရတယ် Pitchingတွေလုပ်ရတဲ့အတွက် Communication skills, Presentation skillsနဲ့ Decision making skills ကောင်းကောင်းရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြားမှာ ဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် Problem solving skillsတွေ၊ Negotiating skill တွေရှိဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ Deadline အမှီလုပ်ရတာတွေရှိတာကြောင့် Time Management ကောင်းကောင်းလုပ်တတ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ Client ရဲ့ Marketing Goal တွေကိုသေချာသိနားလည်ဖို့လိုသလို တစ်ခါတစ်လေမှာ Marketing Campaign တွေ၊ Event တွေလုပ်ရလေ့ရှိတာကြောင့် Creative ဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးကနေ Account Executive တစ်ယောက်ဆိုတာဘာလဲနဲ့ AE တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ကိုယ့်အနေနဲ့ ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲဆိုတာတွေနဲ့ပက်သက်လို့ သိသွားလောက်ပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
အရင်တစ်ပတ်က “Digital Marketing Career ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေပြင်ဆင်ထားသင့်တဲ့ Skills များ”ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတော့ (http://bit.ly/37PWaUx) မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အနေနဲ့ ကိုယ်သိချင်တဲ့ position အကြောင်းလေးတွေရှိရင် comment မှာပြောပြပေးထားခဲ့ပါနော်။